Malunga nathi -FOSHAN KWIINKCUKACHA Furniture CO., LTD
Iifowuni yenye yeefenitshala zeofisi ezinobuchule ezihamba phambili e-China. Sebenza kunye nabayili abaninzi abadumileyo basekhaya nakwinqanawa ukwenza i-brand yosihlalo wesihlalo esinempembelelo kwilizwe jikelele. I-Goodtone isebenzisa umgangatho wefanitshala kunye ne-aesthetics ebonakalayo ukuphucula ixabiso leofisi kunye nokwenza isihlalo esisebenzayo kunye nobuhle beofisi.
Iifowuni ijolise kwicandelo lefenitshala yeofisi, ebambelela kuyilo lwantlandlolo, imveliso yaseTshayina, ifilosofi yeshishini lehlabathi, kuyilo lwegadi ye-avant, ubunjani obugqwesileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye nenkonzo egqibeleleyo, kwimarike yasekhaya nakwamanye amazwe ukuphumelela igama elihle!
Usihlalo we-GOODTONE ofisini, yenza umahluko!
Ngokuhambelana neemfuno zophuhliso lwezentlalo, uqoqosho kunye nokusingqongileyo.Ifenitshala yeefowuni yasekwa eFoshan, kwiPhondo laseGuangdong ngo-2012. Yinkampani yefenitshala encinci neyamazwe aphesheya. Iimveliso zibandakanya iimveliso zangokuhlalo ezijikelezayo. Umzi-mveliso useFoshan, Xiqiao.
Ukwenziwa ngobuchule, inkonzo enyanisekileyo.Ifenitshala yelitye ibambelele kumgaqo "wokwenziwa ngobuchule kunye nenkonzo enyanisekileyo" ukubonelela ngeyona ofisi ikhululekile kuluntu. Ukuqinisekisa ukuba iimveliso zomzi mveliso zenziwe ngobuchule.
Ukuba ngumtshintshi wamazwe aphesheya wefenitshala yase China yasekuqaleni.IGoodtone Ngophuhliso lwe "Innovation" njengamandla okuqhuba angenakuphela ophuhliso lweshishini, ineqela labaqeqeshiweyo nelinamandla le-R & D kwaye liphuhlise iintlobo ezininzi zeemveliso unyaka nonyaka. Ivelise uthotho lweemveliso ezithandwayo nezinconywayo kwimarike, ezithandwa ngabathengi. Ukutsha, siya kuhlala sigcina umoya wokungami, ukhaliphe kwaye uyinyani, ukubonelela abathengi ngeemveliso ezintsha nezikumgangatho ophezulu.
Lwedilesi:No. 18, Qiaogao Road East, Haizhou Industrial Area, Xiqiao Town, District Nanhai, Foshan City, kwiPhondo Guangdong, China